एमबीबीएस पढ्न मन गर्नेलाई एक चिकित्सकको खुलापत्र - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्तर्वार्ता / विचार ∕ एमबीबीएस पढ्न मन गर्नेलाई एक चिकित्सकको खुलापत्र
शुन्य प्रकम्पित शनिबार, २०७६ असोज ४ गते, १६:४० मा प्रकाशित
भर्खर प्लस टु पास गरेर बसेका प्यारा भाइबहिनीहरु र आदरणीय अभिभावक ज्यूहरु !
म यो यसकारण लेख्दैछु र हजुरहरुले यसकारण पढ्नैपर्छ । किनकी, यसरी नै कसैले दश वर्षअघि यस्तैगरी लेखेको हुन्थ्यो वा मैले पढेको हुन्थेँ भने सायद मेरो जीवन विल्कुल अर्कै हुने थियो ! मैले एमबीबीएस पढ्ने अठोट गर्ने थिइन वा अरु उत्तम विकल्पहरु ओझेलमा पर्ने थिएनन । फर्केर हेर्दा जिन्दगीको सबसे उर्जाशील एवं महत्त्वपूर्ण १० वर्ष देखेर आफैंलाई सहानुभूति दिनुपर्ने थिएन ।
भाइबहिनीहरु ! म तिमीहरुजस्तै स्थितिमा हुँदा मलाई लाग्दथ्यो । मैले एमबीबीएस इन्ट्रास इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न सकेँ भने मेरो भविष्य उज्ज्वल हुनेछ । बुवाआमाको मान हुनेछ, उहाँहरु पनि खुसी हुनुहुनेछ, दुःखी बिरामीहरुको सेवा गर्ने मेरो सपना पनि पूरा हुनेछ र समाजमा छुट्टै इज्जत पनि हुनेछ । किन- किन त्यो बेला मेरो दिमागमा एमबीबीएस भन्ने कुरा कस्तरी गढेको थियो । त्यसका निम्न कारणहरु हुन सक्छ्न् ।
मैले जे भोगेँ र देखेँ
म मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेको र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा हुर्किएको मान्छे । मेरो यात्रा पनि माथि उल्लेखित कुनै कारणवश एमबीबीएसतर्फ डोरिन पुग्यो । तर, त्यो यात्रा मेरो लागि सहज थिएन । डेढ वर्षभरि पढेर बसेर आठ वटा भिन्न-भिन्न परीक्षाहरु पश्चात बल्ल छात्रवृत्तिमा नाम निक्लेको थियो । र, म अत्यन्त खुसी थिएँ । तर, घरपरिवारभन्दा धेरै टाढाको कलेजमा ६ वर्षभन्दा बढी समय कसरी बित्यो मलाई मात्र थाहा छ ।
धेरै कुराहरु सिकियो, भोगियो । फरक-फरक पारिवारिक र सामाजिक पृष्ठभूमीबाट समान सपना बोकेर आएका साथीहरुसँग संगत भयो, आफ्नो मात्र नभएर सबैको दुःख, समस्याहरु बुझियो । संसारमै कठिन मानिएको एमबीबीएसको पढाइको तनाव, आमाबुबाको अपेक्षाले थपिदिने मानसिक भार, विद्यार्थीलाई पैसाको स्रोतको रुपमा मात्र हेर्ने र आफूले दिनुपर्ने सुविधाहरु दिन सधैं आनाकानी गर्ने निजी मेडिकल कलेज अनि त्यसका संचालक र तिनले गर्ने छुद्र ब्यवहार ।
कति धेरै मिहिनेत गर्दा पनि पास गर्न मुस्किल परीक्षाहरु । त्यसैबीच कलेजले थपिरहने शुल्कहरु , महिनौँसम्म कति धेरै मानसिक तनावमा रहेर कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएर बल्ल-बल्ल एमबीबीएस पास गरियो । अनि कति धेरै पेलिएर, कति थोरै पारिश्रमिकमा इन्टर्नसीप गरियो । सरासरी पास हुँदा पनि साढे छ वर्ष लाग्यो एमबीबीएस सकिन । त्यसैबीचमा एमबीबीएस नरोजेका वा एमबीबीएसले नरोजेका धेरै साथीहरु जिन्दगीको दौडमा धेरै अघि पुगिसकेका थिए । उनीहरु आत्मनिर्भर भैसकेका थिए, आफ्नो आफ्नो पेशामा जमिसकेका थिए । हामी भने अझै पनि आफ्ना आमाबुवामा परनिर्भर थियौँ ।
मैले छात्रवृत्तिमा पढेवापत सरकारले खटाएको स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने थियो र गरेँ पनि । त्यसबेला पनि थुप्रै अनुभवहरु भए, राम्रा नरामा दुवै । आफ्नै लगानीमा पढेका साथीहरुले पनि स्नातकोत्तर पढ्नुअघि एक वर्ष काम गर्नुपर्ने भएकाले काम गर्न थाले । त्यही बाध्यात्मक अवस्थाको फाइदा उठाउन हो कि किन हो सहर केन्द्रीत अस्पतालहरुले न्यून पारिश्रमिक दिँदा रहेछ्न् । र, त्यतिमै चित्त बुझाएर काम गर्नुपर्ने साथीहरुको बाध्यता । अचम्मको कुरा यो छ कि तिनै मेडिकल कलेजहरु , जसले एमबीबीएस पढ्न लाखौं असुल्छ्न्, उनीहरुले तिनै डाक्टरहरुलाई भने महिनाको पैंतीस हजार दिन पनि हिच्किचाउँछ्न् । तर, सबै कुरा सहेरै राम्रो समय आउला नि भन्ने अपेक्षामा हजारौँ डाक्टरहरु अनिश्चित भविष्यको अस्पष्ट खाका बोकेर रुमल्लिरह्न्छ्न् । थाह छैन अझै कति वर्ष एमबीबीएसपछि पनि किनकि यात्रा लामो छ । एमडी/एमएस (स्नात्कोत्तर) नगरेसम्म्म सुख छैन र त्यो गर्न कठिन मात्रै छैन, अत्यन्त धेरै कठिन छ ।
कारण : प्रत्येक वर्ष एमबीबीएस सकेर बजारमा आउने डाक्टरहरु हजारौं र एमडी/एमएसको सिट तीन चार सय मात्र ।
जे भएपनी परिणाम राम्रै हुने देखिन्छ । जब मेडिकल कलेजहरु बन्द हुन्छन्, तब रास्ट्रलाई चाहिने स्वस्थ्य जनशक्ति उत्पाद्न गर्ने दायित्व सरकारमाथि आइपर्छ र तबमात्र सरकारले बुझ्नेछ मूल्य, चिकित्सकहरुको । यसै पनि अहिलेको अवस्थामा चिकित्सकहरुको संख्यामा भन्दा पनि गुणात्मक रुपमा विकास हुनु पर्ने देखिन्छ ।
विध्यार्थीहरुले पनि एमबीबीएसको सट्टा अरु नै विषय लिएर पढ्नेछ्न् । बेकारको मानसिक तनाव र असुरक्षित लगानी गर्नबाट बच्नेछ्न् । त्यति नै समय र मेहेनत अन्त लगानी गर्ने हो भने उनीहरु सफल र सुखी हुनेछ्न् । छिट्टै आत्मनिर्भर पनि हुनेछ्न् । जुन रास्ट्रको लागि पनि फाइदाजनक हुनेछ । पढाइमा तुलनात्मक रुपमा अब्बल मानिएकाहरु एमबीबीएसमा मात्र आकर्षित नभै अरु विधामा पनि लाग्दा अन्य विधाहरुले पनि कुशल जनशक्ति पाउनेछ्न र रास्ट्रको समग्र विकासमा त्यसले फाइदा नै पुर्याउँदछ ।
देशमा धेरै थोकको अभाव छ । हामी देशवासीहरुको अभिभारा पनि हो । देशका आवश्यकताहरुको पूर्ति गर्न मद्धत गर्ने, तर यसरी होइन । राज्यले चिकित्सकको अभाव र महत्व बुझेको हुन्थ्यो भने यस्तो अवस्था आउने थिएन । कहिले गण्डकी मेडिकल कलेज, कहिले युनिभर्सल मेडिकल कलेज, कहिले चितवन मेडिकल कलेज त कहिले कुन विद्यार्थीहरु पटक-पटक विरोधमा उत्रिनुपर्ने थिएन । डा. गोविन्द केसीले अनशन बसिरहनुपर्ने थिएन । त्यतिका विरोधकाबीच राज्य मौन बसिरहने थिएन । चिकित्सकहरु विदेश पलायन हुनुपर्ने थिएन । मेरो मनमा यी भावहरु आउनुपर्ने थिएनन्, मैले यो लेख्नुपर्ने थिएन । मेरो पिढीका अधिकांश चिकित्सकहरु निराश हुनुपर्ने थिएन ।
देशलाई कुशल क्षमतावान चिकित्सकहरुको आवश्यकता छ । आफैँदेखि बिरत्तिएका, आफ्नो अनिश्चित भविष्यदेखि डराएका र राज्यको बेवास्ताबाट हार खाएका, रुमल्लिएका, आफ्नै मनोवस्था ठिक नभएका चिन्तित असन्तुष्ट चिकित्सकहरु होइन । र, त्यो तब मात्र सम्भव छ, जब हामीले कुरा बुझ्छौँ र भिडको पछि लाग्न छोडछौँ । जब सरकारले कुरा बुझ्नेछ र स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी गर्नेछ, स्वास्थ शिक्षा निःशुल्क गर्नेछ । चिकित्सकहरुलाई सम्मान , सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक र अjसरहरु दिनेछ । होइन भने हाम्रो सपना अनि अनगिन्ती दुःखी बिरामीहरुको स्वास्थ्यलाई सिमित ब्यक्तिहरुले व्यापार बनाइराख्नेछ्न् अहिलेजस्तै । र, समस्या नै समस्या देखिनेछ चारैतिर अनि देशले केबल पाउनेछ चिन्तित चिकित्सकहरु र असन्तुष्ट बिरामीहरु ।
देशकै चिन्ता गर्ने हो भने हाम्रो देशलाई कुशल चिकित्सकहरु जत्तिकै कुशल वैज्ञानिकहरु, अन्वेषकहरु, इमान्दार प्रशासकहरु, कर्मचारीहरु, अर्थविदहरु, शिक्षकहरु, आधुनिक कृषकहरु, गणितशास्त्रीहरु र सबैभन्दा बढी कुशल नेताहरु, योजनाकारहरुको जरुरत छ ।
तसर्थ, छात्रवृत्तिमा नाम निक्ल्यो र मानव सेवामा लाग्ने संकल्पसहित अघि बढ्ने जमर्को छ भने हार्दिक बधाई तथा सुभकामना ! आफ्नै लगानीमा पढ्ने गरी नाम निस्क्यो भने चाहिँ पैसा भएपनि दशपल्ट सोच्नुहोला ! अन्य उत्तम विकल्पहरु हुन सक्छ्न् ! यदि ऋण गरेर, भएको जायजेथा बेचेर पढाउन खोज्दैं हुनुहुन्छ भने चाहिँ सावधान । छोराछोरीलाई रुची नै त्यसमा मात्र छ, यो बाहेक अरु पढ्न परे जिन्दगी नै सखाप हुनेजस्तो लागेको छ, कुशल चिकित्सक बनेर सेवा गर्न दृढ संकल्प र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नडगमगाउने साहस छ भने मात्र । नत्र बेलैमा उचित निर्णय लिनुहोला । नाम निक्लेन भने त झनै बधाई । निराश हुनुपर्ने केही छैन । थुप्रै सुन्दर विकल्पहरु छन् त्यो भन्दा धेरै उत्तम । बुझ्नुकी ठूलो दशा टर्यो ।